त्रियुगा नगरपालिकामा मनाए १८ औं धान दिवस - Nagarik Bahas
त्रियुगा नगरपालिकामा मनाए १८ औं धान दिवस
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ १६, २०७८ समय: ६:०४:५२
उदयपुर । “धान उत्पादनमा वृद्धिः खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि” भन्ने नाराका साथ त्रियुगा नगरपालिकामा १८ औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाएका छन् । नेपालमा असार १५ लाई धान दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । यसै दिन दही चिउरा पनि खाने चलन रहेको छ ।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका १३ बहेडवामा चक्लाबन्दी खेती प्रणाली अन्तर्गत धान रोप्ने मेसिनमा धानको विउ राख्दै प्रमुख अतिथि त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरी र वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष पशुपत्ति चौधरीले १८ औं धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको उद्घाटन गरेका थिए ।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१३ मा १ सय ६० विगाहा क्षेत्रफलमा साहरा कृषि सहकारी संस्थाले चक्लाबन्दी खेतीको प्रवद्र्धन गर्न नमूना खेती अभियान अन्र्तगत धान दिवस मनाएको हो । “खानी कृषि पशु र वन, उद्योग व्यपार र पर्यटन त्रियुगाको धन” भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन धान दिवस मनाइएको त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरीले बताए । त्रियुगा नगरपालिका १३ मा चक्लाबन्दी खेती प्रवद्र्धन गर्न गुरुयोजना सहित आर्थिक योजना अन्तर्गत चक्ला बन्दीखेती समेटिएको मेयर चौधरीले बताए । समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा कृषिलाई लिइएको मेयर चौधरीले बताए ।
मेसिनसमेतको प्रयोग गरी धान रोपाई गरिएको हो । चक्लाबन्दीमा ३०५ घर कृषकहरु सम्मिलित छन् । कृषिलाई समृद्धिको आधारको रुपमा त्रियुगाले यस ठाउँलाई चक्लाबन्दी खेतीको रुपमा अगाडी बढाएको मेयर चौधरीले बताए । चक्लाबन्दी खेतीका लागि तरकारी, फलफुलखेती छन् भने अधिकांश धान, मकै र गहुँ खेती रहेको छ । मेसिन प्रयोग गरी अहिले रोपिएको धान गोड्ने देखि काट्ने र झाट्नेसम्म मेसिन प्रविधि प्रयोग हुनेछ । यस्ता मेसिन तथा आधुनिक प्रविधिले थोरै समयमा धेरै क्षेत्रमा धेरै खेती गरी धेरै उत्पादन गरी धेरै आम्दानी हुने मेयर चौधरीले बताए । चक्लाबन्दी खेतीको २५ वर्षे योजना अनुरुप परम्परागत निर्वाहमुखी छाडेर ब्यवसायिक कृषि अविलम्बन गर्दै चक्लाबन्दी खेती थालनी भएको हो । यसबाट कृषकहरुलाई कृषि प्रति आकर्षित गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने आशा गरिएको छ । चक्लाबन्दी खेतीसंगै कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने छ । त्यस अन्तर्गत, पशुपालन, दलहन, होमस्टे संचालनसमेत जोडिने मेयर चौधरीले बताए ।
कृषिबाटै उनीहरुको जिविकोपार्जन र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य रहेको १३ नं. वडाध्यक्ष पशुपती लेखीले बताईन । चक्लाबन्दी खेती प्रवद्र्धन यस वडाले पनि सकेको सहयोग गर्न तयार रहेको वडाध्यक्ष लेखीले बताईन् ।
यसै अवसरमा हिले दौड प्रतियोगितामा महिलाहरुलाई सहभागि गराइयो । असारे गीत प्रस्तुत गरियो भने वडा नं. १३ का सफल तथा अगुवा किसानहरुलाई सम्मान गरिको थियो ।
उदयपुरका प्रजिअ सेडाईको ६ महिना मै सरुवा
गाईघाट । उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेडाईको सरुवा भएको छ । फागुन २० गते ईलामबाट उदयपुर सरुवा भई आएका सेडाईक...
सिसाघारी सिमसार तथा चिल्ड्रेन पार्क कटारीको गहना हो : मेयर श्रेष्ठ
कटारी । उदयपुरको कटारी नगरपालिका अब व्यापारीक क्षेत्रमात्र हैन आन्तरीक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउने थलोको रुपमा विकसित भएक...
नेपाली काँग्रेसको त्रियुगा नगर सभापतिमा युवा नेता सुमन चौधरीको उम्मेदबारी
उदयपुर । नेपाली काँग्रेसको आसन्न १४ औँ महाधिवेसन नजिकिदै गर्दा उदयपुरमा चुनावी सरगम्री बढेको छ । नेपाली कांग्रेसको त्रिय...
बैचारिक रुपमा नेकपा एस अगाडी छ, ओली आफ्नै घरमा आगो लगाए : अध्यक्ष पोखरेल
उदयपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत समाजवादी बैचारिक रुपमा अगाडी रहेको नव गठिक उदयपुरका अध्यक्ष राममणि पोखरेलले बताए...
नेकपा एस उदयपुरको अध्यक्षमा पुराना नेता पोखरेल
उदयपुर । उददयपुरमा नेकपा एमालेको समानान्तरक कमिटीका अध्यक्ष इश्वरमणि राउतलाई कारबाही गर्दै राममणि पोखरेललाई अध्यक्षमा मन...
उदयपुरमा २८ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा एमाले परित्याग (तस्विरसहित)
उदयपुर । उदयपुरमा दुई पालिका प्रमुख सहित २८ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेकपा एमाले परित्याग गरि नेकपा एकिकृत समाजवादी प...